Ngwa nyocha isiokwu 8 kacha mma (free) maka 2022 | Martech Zone
Keywords mgbe niile dị mkpa maka SEO. Ha na-ahapụ igwe nchọta ka ha ghọta ihe ọdịnaya gị gbasara si otú ahụ gosi ya na SERP maka ajụjụ dị mkpa. Ọ bụrụ na ịnweghị isi okwu, ibe gị agaghị enweta SERP ọ bụla n'ihi na engines ọchụchọ agaghị enwe ike ịghọta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ mkpụrụokwu na-ezighi ezi, mgbe ahụ, a ga-egosipụta ibe gị maka ajụjụ ndị na-adịghị mkpa, nke na-ewetaghị ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ pịa gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jiri nlezianya họrọ mkpụrụokwu ma họrọ nke kacha mma.
Ajụjụ dị mma bụ ka esi achọta mkpụrụokwu ndị ahụ dị mma, dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ ga-eri gị a uba, mgbe ahụ a na m ebe a iju gị - isiokwu nnyocha pụrụ ịbụ nnọọ free. Na post a, m ga-egosi gị otu ngwaọrụ efu iji chọta mkpụrụokwu ọhụrụ na akwụghị ụgwọ ọ bụla. Ka anyị bido.
Nchịkọta Atụmatụ Google
Onye na-ahazi isiokwu bụ otu n'ime ihe a na-akpọ brik-na-mortar Google ngwaọrụ maka nyocha isiokwu. Ọ dị mma karịsịa ịchọta isi okwu maka mgbasa ozi mgbasa ozi. Ngwá ọrụ dị mfe iji - naanị ihe ị chọrọ bụ akaụntụ Mgbasa ozi Google nwere 2FA (ihe amanyere iwu ugbu a). Na ebe a ka anyị na-aga. Iji mee ka mkpụrụokwu gị dịkwuo mkpa, ị nwere ike ịkọwapụta ọnọdụ na asụsụ. Enwere ike ịmechaa nsonaazụ ya ka ewepu ọchụchọ na aro maka ndị okenye nwere akara.
Dị ka ị na-ahụ, Keyword Planner na-enye gị ohere inyocha mkpụrụokwu dabere na ọnụọgụ ọchụchọ kwa ọnwa, ọnụ ahịa ọ bụla ọ bụla, mgbanwe ọnwa atọ na-ewu ewu, na ihe ndị ọzọ. Ihe bụ na isiokwu ndị a chọtara ebe a agaghị abụ ihe ngwọta SEO kacha mma, dịka ngwá ọrụ a na-ahazi iji kwụọ ụgwọ, ọ bụghị mgbasa ozi organic. Nke doro anya nke ọma site na usoro metrik okwu dị ugbu a. N'agbanyeghị nke ahụ, Keyword Planner bụ ebe mmalite dị mma.
Egwu Oche by SEO PowerSuite bụ sọftụwia siri ike nwere ụzọ nyocha ihe karịrị 20 n'okpuru mkpuchi, sitere na Google Ndị mmadụ na-ajụkwa ruo ọtụtụ usoro nyocha asọmpi asọmpi. N'ikpeazụ, nke a na-ahapụ gị ịmepụta puku kwuru puku echiche isiokwu ọhụrụ niile n'otu ebe. Ọkwa Tracker na-ahapụkwa gị inyocha mkpụrụokwu dabara adaba na ọnọdụ gị na asụsụ ebumnuche gị. Dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na data anakọtara site na igwe nchọta na US agaghị abụ nke ziri ezi maka ajụjụ ndị dị na, sịnụ, Russian ma ọ bụ Italian.
Rank Tracker na-ahapụkwa gị ka ịmekota akaụntụ Google Search Console na akaụntụ yana nweta data isiokwu gị niile n'otu ebe.
Na mgbakwunye na mkpụrụokwu n'onwe ha, Rank Tracker na-egosipụta ọtụtụ metrics iji nyere gị aka nyochaa arụmọrụ nke isiokwu, dị ka ọnụọgụ ọchụchọ kwa ọnwa, isi okwu okwu, asọmpi, atụmatụ okporo ụzọ, CPC, atụmatụ SERP, na ọtụtụ ahịa ahịa na SEO ndị ọzọ. .
Nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi modul Keyword Gap, nke na-enye gị ohere ịchọta mkpụrụokwu nke ndị asọmpi gị na-eji.
Otu ihe ọma ọzọ gbasara Rank Tracker bụ na ndị mmepe ha na-ege ntị ihe ndị ọrụ chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ha eweghachitela taabụ isi okwu siri ike na nso nso a:
Taabụ a na-ahapụ gị ka ịpịa isiokwu ọ bụla wee nweta ọnọdụ SERP kacha-10 ozugbo yana stats dị mma nke ibe ndị a.
Rank Tracker na-ahapụkwa gị ka iji sistemụ nzacha ọhụrụ ya dị elu nyochaa mkpụrụokwu gị wee mepụta maapụ isiokwu zuru oke. Ọnụ ọgụgụ isi okwu bụ, n'ụzọ, enweghị oke.
Zaa Ọha dị iche na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya ma na ngosi na n'ụdị nsonaazụ. Dị ka Google Autosuggest na-akwado onye na-emepụta isiokwu a, echiche niile achọtara site na zaa ọha bụ ajụjụ ndị metụtara ajụjụ mbụ gị. Nke a na-eme ka ngwá ọrụ ahụ na-enye aka n'ezie mgbe ị na-achọ isi okwu ogologo ọdụ na echiche ọdịnaya ọhụrụ:
Na mgbakwunye na ajụjụ, ngwá ọrụ ahụ na-ewepụta otu akpaokwu na ntụnyere metụtara ajụjụ mkpụrụ. Enwere ike ibudata ihe niile n'ụdị CSV ma ọ bụ dị ka onyonyo.
Generator isiokwu efu
Isiokwu Generator bụ ngwaahịa nke Ahrefs. Ngwá ọrụ a dị oke mfe iji - ihe niile ị chọrọ bụ itinye mkpụrụokwu mkpụrụ gị, họrọ igwe nchọta na ọnọdụ, yana voila! Generator Keyword ga-anabata gị site na usoro isiokwu ọhụrụ yana ajụjụ metụtara ya na metrik ole na ole dị ka ọnụọgụ ọchụchọ, ihe isi ike na ụbọchị mmelite data kachasị ọhụrụ.
Keyword Generator na-ahapụ 100 Keywords na 100 ajụjụ echiche n'efu. Iji hụkwuo, a ga-ajụ gị ka ịzụta akwụkwọ ikike.
Ezi ochie Search njikwa ga-egosi gị naanị mkpụrụokwu ndị ị debere ọkwa maka. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ohere maka ọrụ na-amị mkpụrụ. Ngwá ọrụ a nwere ike inyere gị aka ịhụ mkpụrụokwu ndị ị na-amaghị na ị na-akwado ya, ma melite ọnọdụ maka ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Console ọchụchọ na-enye gị ohere ịchọta mkpụrụokwu na-adịghị arụ ọrụ.
Keywords ndị na-adịghị arụ ọrụ bụ isi okwu nwere ọnọdụ site na 10 ruo 13. Ha anọghị na SERP mbụ mana ha chọrọ obere njikarịcha mgbalị iji ruo ya.
Console ọchụchọ na-enyekwa gị ohere ịlele ibe ndị dị n'elu ka ị kwalite maka mkpụrụokwu na-adịghị arụ ọrụ, si otú a na-enye gị mmalite mmalite na nyocha isiokwu na njikarịcha ọdịnaya.
Ajukwara, dị ka ị nwere ike ịkọ site na aha ngwá ọrụ ahụ, na-adọta data sitere na Google Ndị mmadụ na-ajụkwa si otú a na-anabata gị na set nke ọhụrụ isiokwu echiche. Naanị ihe ịchọrọ bụ itinye mkpụrụokwu mkpụrụ gị wee kọwaa asụsụ na mpaghara. Ngwa a ga-eme nyocha wee wepụta nsonaazụ ya dị ka otu ajụjụ agbakọtara.
Ajụjụ ndị a bụ n'ezie echiche ọdịnaya emebere (ma ọ bụ ọbụna aha). Naanị ihe nwere ike ime ka iwe were gị bụ na ị nwere naanị nyocha 10 n'efu kwa ọnwa ma enweghị ike mbupụ data n'ụdị ọ bụla. Ọfọn, kedu ka ị siri mee, ị nwere ike ịjụ. Azịza ya bụ nseta ihuenyo. Ọ dịchaghị mma itinye nseta ihuenyo na akụkọ maka ndị ahịa, mana ọ bụ ụzọ mgbapụ maka mkpa onwe onye. N'ihe niile, Ajụkwara bụ onye na-emepụta echiche ọdịnaya mara mma, na echiche ndị ọ na-enye nwere ike ịdị mma maka blọọgụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Nyocha Explorer bụ otu n'ime ngwa MOZ arụrụ arụ. Nke a pụtara na ị ga-achọ akaụntụ MOZ iji jiri ngwá ọrụ ahụ. Nke bụ n'ezie ihe dị mfe. Algọridim dị mfe - ịkwesịrị ịbanye isiokwu gị, kọwaa mpaghara na asụsụ (ha na-ejikọta ọnụ na nke a), na ebe a. Ngwá ọrụ ahụ ga-eji usoro ntụnye isiokwu na nsonaazụ SERP kachasị elu maka ajụjụ mkpụrụ.
Ozugbo ị pịrị Hụ aro niile na Okwu Aro modul, ngwá ọrụ ahụ ga-egosi gị 1000 ọhụrụ isiokwu echiche, otú i nwere dị iche iche ịhọrọ site na.
Maka metrics SEO, ị nweghị ọtụtụ ihe ị ga-enyocha ebe a - ngwá ọrụ ahụ na-ahapụ naanị olu ọchụchọ na mkpa (ngwakọta nke ewu ewu na myirịta nke mkpụrụ okwu mkpụrụ).
Dị ka a jụrụ, Keyword Explorer na-enye gị ọchụchọ 10 n'efu kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ data karịa, ị ga-enweta akaụntụ akwụ ụgwọ.
Isiokwu Surfer bụ ihe mgbakwunye chrome nke Surfer kwadoro n'efu nke, ozugbo etinyere ya, na-egosipụta data isiokwu ozugbo na Google SERP ka ị na-achọ ihe ọ bụla.
Banyere SEO na metrics PPC, Keyword Surfer ga-egosi ihe ndị a: ọnụọgụ ọchụchọ kwa ọnwa na ọnụ ahịa ọ bụla maka ajụjụ mkpụrụ, olu ọchụchọ, na ọkwa nke myirịta maka aro isiokwu ọhụrụ. Ọnụọgụ aro dịgasị iche dabere na okwu ewu ewu (ma eleghị anya?), dịka m nwetara mkpụrụokwu 31 maka nri ndị India na naanị 10 maka gelato.
Ngwá ọrụ anaghị agbanwe ọnọdụ dịka asụsụ a na-ajụ ajụjụ na-akpaghị aka, mana ị nweere onwe gị ịkọwa ya n'onwe gị iji nweta data dị mkpa.
Na mgbakwunye, ngwá ọrụ ahụ ga-enye gị ọnụọgụ okporo ụzọ maka ibe ndị dị na SERP dị ugbu a na ọnụ ọgụgụ nke ajụjụ ajụjụ kpọmkwem ha nwere.
Na mgbakwunye na nyocha isiokwu, ngwá ọrụ ahụ na-enye gị ịmepụta ndepụta akụkọ dabere na ajụjụ mkpụrụ na Surfer AI pụtara. Njirimara mara mma, nke nwere ike ịbụ mmalite dị mma mgbe ị na-arụ ọrụ na ọdịnaya. N'agbanyeghị nke ahụ nnwale na ngwa ọgụgụ isi gosiri na ha niile dabara nnọọ n’azụ ndị edemede bụ́ mmadụ n’ezie.
Iji kwuo ya
Dịka ị na-ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta mkpụrụokwu n'efu. Nsonaazụ ga-adị ngwa ngwa, nke dị mma, na, ihe dị mkpa n'ezie, na nnukwu. N'ezie, e nwere ihe ndị ọzọ free ngwá ọrụ na ngwá maka isiokwu nnyocha, M nnọọ were ndị na-eyi ndị kasị akpali na-enye aka. Site n'ụzọ, kedu ngwa ọrụ ọkacha mmasị gị? Kekọrịta na nkwupụta.
ngosi: Martech Zone na-agụnye njikọ agbakwunyere na edemede a.
Tags: aijụkwarazaa ohanezeAmamịghe echichefree seo ngwaọrụfree ngwaọrụgoogle nyere akagoogle isiokwu nhazigoogle isiokwugoogle search njikwaisi okwu isi ikeisiokwu nchoputagenerator isiokwunnyocha nyochaisiokwu surfermkpụrụokwu organickwụọ ụgwọ kwa Pịanyocha ppcọkwa trackermpịakọta ọchụchọAseo isiokwuseo ngwaọrụsurfa ai